Al Shabaab oo daqliga ka soo galo Magaalada Muqadishu labalaabmay. Sabab? - Muqdisho Online
Home Wararka Al Shabaab oo daqliga ka soo galo Magaalada Muqadishu labalaabmay. Sabab?
Al Shabaab oo daqliga ka soo galo Magaalada Muqadishu labalaabmay. Sabab?
Kooxda Al Shabaab oo dhawalahan danbe ka waday magaalada Muqadishu shirar ay la yeelanayaan ganacsatada iyo hay’adaha ka howgala magaalada Muqadishu ayaa waxa ay ku guuleysteen in ay dib u soo celiyaan kalsoonida qaar ka mida shacabka ku dhaqan magaalada Muqadishu. Shacabka ku dhaqan magaalada Muqdishu ayaa waxaa la soo daristay amaandari yo cabsi taas oo saameysay ganacasigooda.
Waxaa shacabka ku dhaqan Muqadishu ay deganaansho iyo amaan ka raadiyeen degaanada ay ka taliyaan kooxda Al Shabaab taas oo ah wixii ka danbeeya wadada Wadnaha. Maalin kastaa waxa la arkayaa shacab ka soo guurayo deegaanka dowlada ka taliso oo u guurayo xaafada hoos yimaada kooxda Al Shabaab taas ayaan keentay in uu sare u kac ku yimaado qiimaha kirada xaafadaha hoos yimaada Al Shabaab.
Kooxda Al Shabaab ayaa waxa ay ka qaadaan ganacsatada Muqadishu iyo nawaxigeeda qarasha cashuur ah laakiin ay Al Shabaab ku sheegaan in tahay Zako ama taakuleynta jihaadka kooxda Al Shabaab kula jiraan dowlada Soomaaliya iyo ciidamada shisheeye ee dalka Soomaaliya ku sugan.
Kooxda Al Shabaab ayaa waxa ay hadda bilaabeen in ay lacag ka qaadaan dhamaan dhismayaasha laga dhisayo magaalada Muqadishu. Xaafado aan ka fogaynin madaxtooyada ayaa waxaa ay bixiyaan lacag canshuur ah iyaga oo fasax ka soo qaata kooxda Al Shabaab. Sidoo kale ma jirto degaan ka mida Muqadishu oo guryo laga dhiso karo iyada oo aan ogolaasho laga qaadan Al Shabaab.
Dhank kale shacabka Muqadishu ayaa cadaalad u raadsada Kooxda Al Shabab taas o iyadana ay ka soo gasho lacag lagu tilmaamay howl fulin.
Daqliga kooxda Al Shabaab ayaa waxa ku yimid koror ka dib markii Al Shabaab si toos ah u bilaabeen in ay ugu howlgalaan magaalada Muqadishu iyada oo ayan jirin awood is hor istaagi karta.
Previous articleSomaliland: Somalia Continues to Undermine resuscitation of Stalled Talks between Hargeisa and Mogadishu
Next article(Daawo Video) Ciidankii ugu horreeyay oo ka soo baxay furimaha dagaalka iyo kuwa kale oo la filayo